GPS Arduino: maka ọnọdụ na nhazi nke ọrụ gị | Akụrụngwa n'efu
GPS Arduino: maka ebe na ọnọdụ
Na mmepe osisi Arduino nwere ike rụọ ọtụtụ ọrụ, njedebe bụkarị echiche. Na ihe ntanetị na modulu, enwere ike ịgbakwunye arụmọrụ ka ị nwee ike ịmekwu ihe. Otu n'ime ọrụ ndị a nwere ike ịbụ ikike chọta ihe ma ọ bụ ndị mmadụ, ma ọ bụ chọta site na iji ọnọdụ na Arduino GPS.
Ụdị nke a n'obere na tracing enwere ike iji RFID ma ọ bụ ihe nnabata dị ka nke anyị ga-atụle n'isiokwu a. Site na nke a ị ga - enwe ike ịmepụta ọtụtụ ọrụ, site na egwuregwu nke iji mepụta onye nchoputa ma chọta ihe, ịchọta ihe ezuru ezu, iji nwee ike ịchọta onwe gị site na iji GPS, wdg.
1.1 Ebe ịzụta NEO-6 maka Arduino GPS
2 Ihe Nlereanya na Arduino
Iji nweta Arduino GPS, ị nwere ike iji ya NEO-6 ngwaọrụ, Ezinụlọ nke U-Blox rụpụtara na nke ahụ nwere ike jikọta ya na bọọdụ Arduino n'ụzọ dị mfe. Na mgbakwunye, ha nwere interface nkwukọrịta zuru oke, ya na UART, SPI, I2C, na USB, na mgbakwunye na ịkwado NMEA, UBX ọnụọgụ abụọ na RTCM ogbugba ndu.
Na mgbakwunye, GPS a nke Arduino nwere NEO-6 na-enyekwa gị ohere iwelata ogo nke ọrụ gị, ebe ọ nwere obere nha, yana ọnụ ala dị ala. N'ihe oriri, ọ dịkwa obere. Mgbe ị nọ n'ọrụ, ọ ga-achọ 37mA naanị. Enwere ya site na 2.7 ruo 3.6V maka ụdị NEO-6Q na NEO-6M, ebe enwere ndị ọzọ nke obere voltage akpọrọ NEO-6G nke chọrọ naanị n'etiti 1.75 na 2v.
Ọ bụrụ na ha abanye n'ime a modul, ga-agụnye a voltage njikwa nke ga - enye ya ike site na njikọ Arduino 5v.
Ihe ndị ọzọ na-adọrọ mmasị nke usoro ihe a bụ:
30 sekọnd nke oge mgbanye ọkụ ọkụ oyi, na naanị 1 sekọnd maka mmalite mmalite.
La mmesho kachasị ha na-arụ ọrụ naanị 5Hz.
Ọnọdụ ziri ezi nke mita 2.5 nke mgbanwe.
Izi ezi ọsọ 0.1 m / s.
Usoro mgbanwe nke naanị 0.5º.
Ebe ịzụta NEO-6 maka Arduino GPS
Nwere ike ịchọta ngwaọrụ ndị a na modulu n'ọtụtụ ụlọ ahịa elektrọnik pụrụ iche, ma ọ bụ kwa na Amazon. Dịka ọmụmaatụ, ebe a ị nwere ike zuta ya na onu ahia di ala:
Ihe Nlereanya na Arduino
Nwere ike ịmụtakwu ihe gbasara mmemme na Arduino site na PDF n'efu ị nwere ike ibudata ebe a.
Ihe mbụ ị ga - eme iji jikọọ ya na bọọdụ mmepe gị ma nwee Arduino GPS gị bụ ijikọ usoro NEO-6 gị na bọọdụ ahụ. Na njikọ emere nke ọma (NEO-6 njikọ njikọ - njikọ Arduino):
Ozugbo ijikọchara ya, ị ga - ebudata ya Ọba akwụkwọ SoftSerial na gị Arduino IDE, dịka ọ ga-adị mkpa maka nkwukọrịta usoro. O yikarịrị ka ị nwere ya site na ọrụ ndị ọzọ, mana ọ bụrụ na ọ bụghị, ị ga-enwe ya budata ma tinye na njirimara gị.
Ozugbo emere nke ahụ, ị ​​nwere ike ịmalite site na koodu dị mfe iji gụọ agụ. Dịka ọmụmaatụ, ebe enwere ike iji ọtụtụ usoro ogbugba, ebe a bụ eserese maka NMEA:
N'ezie, ị nwere ike ịme mgbanwe gị ma ọ bụ jiri usoro iwu ndị ọzọ ma ọ bụrụ na ịchọrọ ... can nwekwara ike iji ihe atụ dị na IDE gị maka ọbá akwụkwọ a. Mana, tupu ịkwụsị isiokwu ahụ, ị ​​kwesịrị ịma nke ahụ usoro NMEA (National Marine Electronics Asociation) dị oke mkpa, iji ghọta ya, ị ga-amata usoro njikọ ya:
Nke ahụ bụ, usoro $ GPRMC sochiri kwa na-egosi ebe:
hmms.ss: bụ oge UTC na awa, nkeji na sekọnd.
A: ọkwa nnabata, ebe A = OK na V = anya.
llll.ll, ka: bụ ohere, ebe a nwere ike ịbụ N ma ọ bụ S, maka ugwu ma ọ bụ ndịda.
yyyy.yy, a: bụ ogologo. Ọzọ a nwere ike ịbụ E ma ọ bụ W, ya bụ, ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ.
vv: ọsọ na mara akpụ.
xx: bụ ihe ọmụmụ na ogo.
ddmmyy: bụ UTC ụbọchị, na ụbọchị, ọnwa na afọ.
mm, a: bụ mgbanwe magnetik na ogo, na a nwere ike ịbụ E ma ọ bụ W maka ọwụwa anyanwụ ma ọ bụ ọdịda anyanwụ.
* H H: Checksum ma ọ bụ checksum.
Iji maa atụ, ị nwere ike nweta ihe dịka nke a:
Pathzọ zuru ezu na edemede: Akụrụngwa n'efu » Arduino » GPS Arduino: maka ebe na ọnọdụ
LibreCellular: ngwaike na ngwanrọ n'efu iji mepụta netwọkụ mkpanaka gị